को थिए सातसल्लेमा मारिएका ती आठ जना ? - Nagarik Medi
२०७८ भाद्र ५, शनिबार मा प्रकाशित १0 महिना अघि
हेर्दा साधारण लुवाईखवाईका देखिन्थे । उमेर आलोकाँचो देखिन्थ्यो । उनीहरु अघिअघि थिए । दुईजनाले हातमा गुन्द्री च्यापेका थिए । पछिपछि एक हुल पुलिसले पछ्याईरहेका थिए । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ७ टोक्सेलका कृष्णलाल गौतम (९० वर्ष) को स्मृतिमा अझै ताजा छ ।
त्यो दिन, अर्थात २०३१ साल माघ ३ गते । बेलुकीको साँढे चार बजेतिर उनको घरबाट ओरालो लागेका थिए त्यो हुल । एक्कासी साँझमा गोली पड्किएको सुने । पछि थाहा भयो तिनिहरु सबै सातसल्लेमा गोली ठोकेर मारिएछन् ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली काँग्रेसले चलाएको तत्कालीन शसस्त्र आन्दोलनताका उनीहरु मारिएका थिए । इतिहासको ठूलो काण्डको रुपमा लिइने ‘टिम्बुरबोटे’ बाट पक्रेर राजविराज अदालत चलान गर्ने क्रममा सातसल्लेमा आठजना मारिएका थिए ।
‘टिम्बुरबोटे काण्ड’ पञ्चायत विरुद्धको एउटा ठूलो घटना थियो । एउटै काण्डबाट २८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सोलुखुम्बुको टिम्बुरबोटे भन्ने जंगलको गुफामा लुकेर बसेका उनीहरुलाई बम प्रहार गरिएको थियो । केहीको घटनास्थलमै ज्यान गयो । केहीलाई पक्राउ गरि पछि मारियो ।
सातसल्लेमा मारिनेहरु सात जनामात्र भनिएपनि स्थानीयले एकजना भरिया सहित आठ जनालाई मारेको बताउँछन् । ‘सहिद लीला–यशोदा स्मृति प्रतिष्ठान’ले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा २०३१ माघ ३ गते एउटै मितिमा टोक्सेलमा ज्यान गुमाउनेहरुको सूची आठ जनाको छ । मारिने मध्येका टिकाराम राई पनि टोक्सेलमै मारिएको भनेपनि कुन मितिमा मारिएको, कहाँको मान्छे हुन् भन्ने उल्लेख छैन ।
सातसल्लेमा आठजनालाई एकै चिहान बनाईएको स्थल ।
सातसल्ले हत्याको बयान हिजोआज कथा झैँ बनेको छ । मारिएका मध्ये एकजनाको आफ्नै भिनाजु प्रहरीको टोलीमा थिए । भिनाजुले आफैले आफ्नै सालोलाई मार्नुपर्ने बाध्यता भएपछि शुरुमै खुसुक्कै भनेका थिए रे, ‘म गोली ठोकेजस्तो गरेर नलाग्ने गरि चलाउँछु । लडेजस्तो गरेर पछि उठेर भाग्नु ।’ दुर्भाग्यवशः उनले चलाएको गोली लागेर सालो घाईते भए । पछि अर्को साथीले थप गोली ठोके । अनि उनले प्राण त्यागे ।
खाल्डोमा उनीहरुलाई लहरै पारेर गोली ठोकिएको थियो । त्यसमध्ये एकजनाको खुट्टामा मात्रै गोली लागेछ । मर्यो भनेर छोडिदिएकोमा पछि उठेर भागेछन् । भोलिपल्ट नजिकैको भँडारे भन्ने गाउँको एक घरमा पुगेर बास माग्दा रगताम्य देखेपछि स्थानीय डराए । प्रहरीलाई सुराकी गरे । उनलाई समातेर पर्सिपल्ट फेरी सातसल्लेमै लगेर गोली हानी मारियो । सबैलाई मारिसकेपछि प्रहरीहरु वरपरकै घरमा बास मागेर बसे । धेरैजसो मोदनाथ गौतमको घरमा बास बसे । (मोदनाथ बसाई सरेर हाल सुनसरी गएका थिए उनी दुइ वर्ष अघि बिते।)
इतिहास मोड्ने घटना
इलाम घर भई प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका चर्चित कप्तान यज्ञबहादुर थापा टिम्बुरबोटे काण्डमै मारिए । उनलाई समातेर कमला नदीको किनार पुर्याएर मारिएको थियो । तत्कालिन बडाहाकिम मखनध्वज थापाका छोरा भएर पनि कप्तान यज्ञबहादुर देश र जनताको मुक्तिको लागि आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
‘म गोली ठोकेजस्तो गरेर नलाग्ने गरि चलाउँछु । लडेजस्तो गरेर पछि उठेर भाग्नु ।’ दुर्भाग्यवशः उनले चलाएको गोली लागेर सालो घाईते भए । पछि अर्को साथीले थप गोली ठोके । अनि उनले प्राण त्यागे ।
टिम्बुरबोटे काण्डमा कप्तान थापासँगै नेत्रबहादुर कार्की, भवीन्द्रबहादुर बस्नेत, मानबहादुर बोखिम (लिम्बु), शिवकुमार राई, मोलबहादुर राई, अगमुनि राई, पेशलकुमार दाहाल, कृष्णबहादुर लिम्बु, प्रजालाल राई, पदमप्रकाश पुरी, श्यामकुमार गुरुङ, महेशकुमार कोइराला, माइला राई (पुर्णबहादुर), रामप्रसाद पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, लालबहादुर थापा मगर, मानबहादुर मगर, चन्द्रबहादुर तामाङ (बाँकी सातसल्लेमा मारिएको आठजनाको नाम र अन्य विवरण तल उल्लेख छ ।) ले सहादत प्राप्त गरे ।
टिम्बुरबोटे काण्डमा होनहार नेता, कार्यकर्ता र सिपाहीले ज्यान गुमाएपछि वि.पी. कोइराला अत्यन्त दुःखित भए । यही घटनापछि उनले सँधैको लागि शसस्त्र आन्दोलन बन्द गर्ने घोषण गरे । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्मै काँग्रेस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमियो । ‘टिम्बुरबोटे काण्ड’ कै कारण काँग्रेसले हतियारको राजनीति त्यागेका थिए ।
यत्तिका इतिहास बोकेको सातसल्लेको बारेमा अझैपनि धेरै अनभिज्ञ छन् । प्रजातन्त्रप्राप्ति र २०६२/0६३ को जनआन्दोलन स“गै लोकतन्त्र स्थापना भयो । तर सातसल्लेमा हालै एक शहिद पार्क बनेको छ । सडक मार्ग खुलेपछि पैदल मार्गको रुपमा प्रयोग गरिने सातसल्ले रुट ओझेलमा पर्यो ।
वडाअध्यक्ष केशव ढुंगानाका अनुसार सातसल्लेमा हिउँद वर्षा गाडी पुग्ने कच्ची सडक पुगेको छ । हालसम्म यहाँ ३५ लाख खर्च भईसकेको छ । २१ रोपनी जग्गा खरिद गरि सातसल्लेको संरक्षण शुरु गरिएको छ । तर बजेट अनुसारको काम भएको छैन । ऐतिहासिक स्थलको रुपमा संरक्षण गर्ने हो भने अझै यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । केही वर्ष अघि डा.शंशाक कोइरालाले सातसल्ले आएर आफ्ना पिता विपिका सिपाहीहरुलाई मारिएको ठाउ“मा विकासका पूर्वाधार बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
ती प्रतिबद्धता पुरा नभएपनि सातसल्लेको सुसेलीमा अझै सहिदका सपनाहरु सुसाईरहेझैँ लाग्छ । सहिदको रगतले भिजेको सातसल्लेलाई भुल्नु नयाँ पुस्ताको लागि ठूलो भूल हुनेछ ।
एउटै मितिमा मारिनेहरुको विवरण यसप्रकार छ ।
१. रामकुमार सुनुवार (रामु)
ठेगानाः– तिङला–७, सोलुखुम्बु
मारिँदाको उमेरः– १९
२. शमशेरबहादुर कार्की
मारिँदाको उमेरः– २९
३. हर्कबहादुर कार्की (काजी)
ठेगानाः– तिङला, सोलुखुम्बु
मारिँदाको उमेरः– २१
४. अम्बरबहादुर खड्का
ठेगानाः– तिङला ६ लाममाने, सोलुखुम्बु
५. होमशेर राई
ठेगानाः– माखम्ला फेदी ३, खोटाङ
मारिँदाको उमेरः– छैन
६. होमप्रसाद राई
७. जमदार कर्णबहादुर बस्नेत
ठेगानाः– मंगलटार, खोटाङ
८. भीमबहादुर कटुवाल
ठेगानाः– तिङला ७, सोलुखुम्बु
९. टीकाराम राई
(मारिएको मिति र स्थायी ठेगाना छैन । उनी टोक्सेलघाटमै मारिएको भनाई छ ।)
सहिदका विवरणहरु ‘सहिद लीला–यशोदा स्मृति प्रतिष्ठान’ले प्रकाशन गरेको पुस्तकबाट उल्लेख गरिएका हुन् ।